Mbola mila ezaka ! • AoRaha
Mbola mila ezaka !
Mbola lavitra ny lalana amin’ny fanadiovana ireo mpitandro filaminana zatra ny lalan-dririnina. Efa taona maromaro, na efa nisy Taonjato mihitsy aza, angamba, no lò tanteraka io rafitra io. Fanararaotam-pahefana, fanaovana kolikoly, firaisana tsikombakomba amin’ireo jiolahy, dahalo ambony latabatra …
Tsy misy tsy mahalalala izany ny olom-pirenena. Rehefa misy asa ratsy miseho, tsy maintsy misy foana ireo mpitandro filaminana mpiray petsapetsa.
Ao anatin’izao fitondrana izao, vao manomboka henon’ny rehetra ny ezaka ataon’ireo lehibe, amin’ny fanasaziana an’ireo mpitandro filaminana mihoa-pefy. Toraka voninkazo ho an’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny, izay manao ny ainy tsy ho zavatra amin’ny asa fanadiovana anatiny, isaky ny sampan-draharaha misy azy avy. Re ombieny ombieny ny hoe: « tsy hijerena tavan’olona intsony manomboka izao izay mpandika lalàna eo anivon’ireo tandroka aron’ny vozona fa rehefa mandoto rano hosaziana mafy ». Marina loatra izany.
Mijaly ny vahoaka. Raha vao maheno fotsiny hoe miaramila, na polisy, na zandary, dia mifori-drambo miharitra « trèfle » an’izay tranga mahazo azy eo. Ao anatin’izany ny fampihorohoroana ireo mponina eny ambanivohitra, ny kolikoly eny an-dalam-be, ny famotsorana ireo olo-meloka noho ny risoriso, fandrobana fananan’olona, fanararaotam-pahefana tsotra izao.
Ampy izay! Ekena fa ny saonjo iray lohasaha tsy hilaozan’izay hamarara. Efa misy ny fandraisana andraikitra, saingy mbola mila ezaka goavana!